China umenzi we-19 intshi yokubeka i-48V 50Ah ibhetri ye-lithium ion (LiFePO4) yomnxibelelanisi wonxibelelwano kunye noMthengisi | LIAO
1. I-19 intshi yokubeka i-48V 50Ah LiFePO4 ipakethe yebhetri yeenkqubo zokugcina amandla elanga.
Umzekelo No. Ukuvuselela-F4850T
Amandla ombane 48V
Amandla okuzimela 50Ah
Ubukhulu. ukuqhubeka kwentlawulo ngoku 60A
Ubukhulu. Ukukhutshwa ngoku okuqhubekayo 60A
Ubunzima Malunga ne-30kg
Ubukhulu 440mm * 320mm * 133mm
Ukusetyenziswa Eyenzelwe ngokukodwa isikhululo sesiseko sezonxibelelwano, nayo ingasetyenziselwa amandla okubuyisela emuva, ilanga＆Iinkqubo zomoya, ukugcinwa kwamandla ekhaya, i-UPS, njl.
3. Ukhuseleko oluphezulu: Phantse olona hlobo lwebhetri ye-lithium ekhuselekileyo yamkelwe kolu shishino.
4. Ngomsebenzi wonxibelelwano we-RS232 okanye i-RS485.
5. Umsebenzi ofanayo: unokusetyenziswa ngokufanayo ukwandisa umthamo.
6. Akukho siphumo sememori, uxinano oluphezulu lwamandla, kunye nesalathisi se-SOC.
Amandla eSolar (Amandla) INtshayelelo
Inkqubo yokuveliswa kwamandla elanga iqulethe iipakethi zebhetri yelanga, izilawuli zelanga kunye neebhetri (amaqela). Ukuba ufuna amandla emveliso yenkqubo yelanga ukuba ibe yi-AC 220V okanye i-110V, kufuneka ulungiselele inverter.
Iinkqubo zokuveliswa kwamandla elanga zahlulwe zangumthombo ongasebenzisi gridi, iinkqubo zokuvelisa umbane ezixutywe kwigridi kunye neenkqubo zokuhanjiswa kwamandla:
1. Inkqubo yokuvelisa umbane ngaphandle kwegridi ubukhulu becala yenziwe ngamacandelo eseli elanga, abalawuli, kunye neebhetri. Ukuba amandla emveliso yi-AC 220V okanye i-110V, kufuneka inverter.
2. Inkqubo yokuveliswa kwamandla e-grid kuthetha ukuba i-current current eveliswa yimodyuli yelanga iguqulwa yangoku ehambelana neemfuno zombane wombane we-grid yi-inverter eqhagamshelwe kwigridi emva koko idityaniswe ngqo kwigridi yoluntu. Iinkqubo zokuvelisa umbane eziqhagamsheleke kwigridi zibeke embindini izikhululo zombane ezinkulu-eziqhagamsheleneyo, ngokubanzi zizikhululo zamandla zenqanaba lesizwe. Eyona nto iphambili kukuba amandla avelisiweyo agqithiselwa ngqo kwigridi, kwaye iigridi zisasazwa ngokufanayo ukubonelela ngombane kubasebenzisi. Nangona kunjalo, olu hlobo lwesikhululo samandla lunotyalo-mali olukhulu, ixesha elide lokwakha, kunye nendawo enkulu, kwaye ayikaphuhlisi kangako. Inkqubo yokuhambisa umbane esasazwayo esincinci esincinci, ngakumbi inkqubo yokwakha umbane ehlanganisiweyo, yeyona nto iphambili yokuphehlwa kombane ngenxa yeenzuzo zotyalo-mali oluncinci, ulwakhiwo olukhawulezayo, umkhondo omncinci, kunye nenkxaso enkulu yomgaqo-nkqubo.
3. Inkqubo yokuhambisa umbane esasaziweyo, ekwabizwa ngokuba kukwenziwa kwamandla okwabiwa kwamandla okanye ukuhanjiswa kwamandla, ibhekisa kuqwalaselo lwenkqubo encinci yokuhambisa umbane kwi-site yomsebenzisi okanye kufutshane nendawo yokusebenzisa amandla ukuhlangabezana neemfuno zabasebenzisi abathile kunye nenkxaso Uthungelwano olukhoyo Umsebenzi woqoqosho, okanye ukuhlangabezana neemfuno zezi zinto zimbini ngaxeshanye.
Egqithileyo I-Abs casing 2000+ imijikelezo yobomi be-lithium ion ibhetri eyi-12V 100Ah ene-BMS
Okulandelayo: Ubukhulu obuncinci bobunzima bokukhanya 6V 10Ah Lifepo4 ipakethe yebhetri ene-BMS eyakhelweyo
Ubushushu obusebenza ngokubanzi bokuqina okuphezulu kwe-12V 60Ah iphakethe yebhetri ye-lithium yenkqubo yokubeka iliso kwi-Intanethi
Intengiso eshushu ye-19 intshi yokufaka i-UPS ibhetri engu-48V 40Ah iphakethe yebhetri ye-lithium ion
Ubukhulu obuncinci bobunzima bokukhanya 6V 10Ah Lifepo4 ipakethe yebhetri ene-BMS eyakhelweyo
Ukugcinwa kwamandla kuyilo olucwangcisiweyo lwe-12V 10Ah LiFePO4 ibhetri epakishwe nge-BMS
2000+ umjikelo wobomi besinyithi iseti 12V 12Ah LiFePO4 ibhetri yenkqubo yokukhanyisa
I-ABS yokuhambisa umbane ophathwayo 48 Volt 30Ah iphakethe yebhetri ye-lithium